मैले बीस वर्षभन्दा बढी समयदेखि बाइबल अध्ययन गर्दैआएको छु। बाइबललाई ४० जनाभन्दा बढी विभिन्न लेखकहरूद्वारा फरक-फरक समयमा लेखिएको भए पनि यसमा एउटै पनि त्रुटि छैन भन्‍ने मैले थाहा पाएको छु। यसले परमेश्‍वर नै बाइबलको वास्तविक लेखक हुनुहुन्छ, र धर्मशास्त्रका सबै पुस्तकहरू पवित्र आत्माबाट आएका हुन् भन्‍ने कुरालाई यसले प्रमाणित गर्छ। | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
“यहोयाकीनले शासन गर्न थाल्दा तिनी अठाह्र वर्षका थिए, र तिनले यरूशलेममा तीन महिना शासन गरे। तिनकी आमाको नाउँ नेहूश्‍ता थियो, जो यरूशलेमकी एल्‍नातानकी छोरी थिइन्” (२ राजा २४:८)।
“यहोयाकीनले शासन गर्न थाल्दा तिनी आठ वर्षका थिए, र तिनले यरूशलेममा तीन महिना दश दिन शासन गरे: र तिनले त्यही काम गरे जुन यहोवाको नजरमा दुष्कर्म थियो” (२ इतिहास ३६:९)।
“येशूले उसलाई भन्‍नुभयो, साँच्‍चै म तिमीलाई भन्छु, आजको रात, भाले बास्‍नुभन्दा पहिले, तिमीले मलाई तीनपटक इन्कार्नेछौ” (मत्ती २६:३४)।
“र येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, म साँच्‍चै तिमीलाई भन्छु, आज, यही रात दुईपटक भाले बास्‍नुभन्दा पहिले, तिमीले मलाई तीनपटक इन्कार गर्नेछौ” (मर्कूस १४:३०)।
“अनि उहाँले भन्‍नुभयो, पत्रुस, म तिमीलाई भन्छु, तिमीले मलाई चिन्छौ भन्‍ने कुरालाई तीनपटक इन्कार नगरेसम्‍म आज भाले बास्‍नेछैन” (लूका २२:३४)।
“येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, के तिमी मेरो खातिर आफ्‍नो ज्यान दिन्छौ? साँचो-साँचो म तिमीलाई भन्छु, तिमीले मलाई तीनपटक इन्कार नगरूञ्‍जेलसम्‍म भाले बास्‍नेछैन” (यूहन्‍ना १३:३८)।
“अनि तिनले मन्दिरमा चाँदीका टुक्राहरू फ्याँके, र त्यहाँबाट हिँडे, अनि गएर झुन्डिएर आत्महत्या गरे” (मत्ती २७:५)।
“अब यो मानिसले अधर्मको इनामबाट जमिन किन्यो; र उँधोमुन्टो भई खसेर, दुई भाग भई फुट्यो, र त्यसका सबै आन्द्रा-भुँडी छताछुल्ल भए” (प्रेरित १:१८)।
आज, तिमीहरूका बीचमा कसले पवित्र आत्माले प्रयोग गर्नुभएकाहरूले बोलेका सबै वचनहरू पवित्र आत्माबाट नै आएका थिए भनेर भन्‍ने आँट गर्छ? के कसैले त्यस्ता कुराहरू भन्‍ने आँट गर्छ? यदि तैँले त्यस्ता कुराहरू भन्‍ने आँट गर्छस् भने, एज्राको अगमवाणीको पुस्तकलाई किन खारेज गरियो, र प्राचीन सन्तहरू र अगमवक्ताहरूको पुस्तकलाई पनि किन त्यसै गरियो? यदि ती सबै पवित्र आत्माबाट नै आएका थिए भने, तिमीहरूले किन त्यस्तो स्वेच्‍छाचारी छनौटहरू गर्ने आँट गर्छौ? के तँ पवित्र आत्‍माको कार्यलाई छनौट गर्न योग्य छस्? इस्राएलका धेरै कथाहरूलाई पनि खारेज गरियो। अनि यदि तँ विगतका यी लेखहरू पवित्र आत्‍माबाट आएका हुन् भन्‍ने विश्‍वास गर्छस् भने, किन कतिपय पुस्तकहरूलाई खारेज गरियो? यदि ती सबै पवित्र आत्‍माबाट नै आएका थिए भने, तिनीहरू सबैलाई सुरक्षित राखिनुपर्थ्यो, र पढ्नको लागि मण्डलीहरूका दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरूकहाँ पठाइनु पर्नेथियो। तिनीहरूलाई मानिसको इच्‍छाद्वारा चुनिनु वा हटाउनु हुँदैनथियो; त्यसो गर्नु गलत हो। पावल र यूहन्‍नाका अनुभवहरू तिनीहरूका व्यक्तिगत अन्तर्दृष्टिहरूसँग मिसिएका थिए भन्दैमा तिनीहरूका अनुभवहरू र ज्ञान शैतानबाट आएको थियो भन्‍ने हुँदैन, तर तिनीहरूसँग तिनीहरूका व्यक्तिगत अनुभवहरू र अन्तर्दृष्टिहरूबाट आएका कुराहरू थिए भन्‍ने मात्रै यसको अर्थ हुन्छ। तिनीहरूका ज्ञान त्यस बेलाको तिनीहरूको खास अनुभवहरूको पृष्ठभूमि अनुरूप थियो, र यो सबै पवित्र आत्माबाट नै आएको थियो भनेर कसले निर्धक्‍कसाथ भन्‍न सक्छ? सुसमाचारका चार वटै पुस्तकहरू पवित्र आत्‍माबाट आएका थिए भने, किन मत्ती, मर्कूस, लूका र यूहन्‍नाले येशूको कामको बारेमा केही फरक-फरक कुरा भने? यदि तिमीहरू यो कुरामा विश्‍वास गर्दैनौ भने, पत्रुसले प्रभुलाई कसरी तीन पटक इन्कार गरे त्यसको बारेमा बाइबलमा दिइएको विवरणलाई हेर: तिनीहरू सबै फरक छन्, र ती प्रत्येकमा आ-आफ्‍नै विशेषताहरू छन्। अज्ञानी धेरैहरूले यसो भन्छन्, “देहधारी परमेश्‍वर पनि मानिस नै हुनुहुन्छ भने, के उहाँले बोल्‍नुहुने वचनहरू पूर्ण रूपमा पवित्र आत्‍माबाट नै आउन सक्छन्? यदि पावल र यूहन्‍नाका वचनहरू मानव इच्‍छाद्वारा मिश्रित थिए भने, के उहाँले बोल्‍नुहुने वचनहरूमा मानव इच्‍छा वास्तवमै मिश्रित छैनन् र?” यस्ता कुराहरू भन्‍ने मानिसहरू अन्धा र अज्ञानी हुन्! सुसमाचारका चार पुस्तकहरूलाई ध्यान दिएर पढ; येशूले गर्नुभएका कुराहरू र उहाँले बोल्‍नुभएका वचनहरूका बारेमा तिनमा के विवरण दिइएका छन् त्यसलाई पढ। हरेक पुस्तक अलिक फरक छ, र हरेकको आ-आफ्‍नै दृष्टिकोण छ। यदि यी पुस्तकहरूका लेखकहरूले लेखेका कुराहरू सबै पवित्र आत्‍माबाट आएका थिए भने, यो सबै उही र समरूप हुनुपर्ने थियो। त्यसो भए किन तिनमा भिन्‍नताहरू छन् त? के यसलाई देख्‍न नसक्‍ने गरी मानिस अत्यन्तै मूर्ख छैन र?
नयाँ करारको मत्तीको सुसमाचारले येशुको वंशावलीको दस्तावेजीकरण गर्छ। सुरुमा, यसले भन्छ कि येशू अब्राहाम र दाऊदका सन्तान र योसेफका छोरा थिए; त्यसपछि यसले भन्छ कि येशू पवित्र आत्माबाट गर्भधारण हुनुभयो अनि कन्याबाट जन्मनुभयो—यसको मतलब उहाँ योसेफको छोरा वा अब्राहम र दाऊदका सन्तान हुनुहुन्नथ्यो। यद्यपि, वंशावलीले येशू योसेफसित सम्बन्धित हुनुहुन्छ भनेर जोड दिन्छ। त्यसपछि, वंशावलीले येशू जन्मनुभएको प्रक्रियाको अभिलेख राख्न सुरू गर्दछ। यसले भन्छ कि येशू पवित्र आत्माबाट गर्भधारण हुनुभएको थियो, उहाँ कन्याबाट जन्मनुभयो, र उहाँ योसेफको छोरा हुनुहुन्नथ्यो। यद्यपि वंशावलीमा यो स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि येशू योसेफका पुत्र हुनुहुन्थ्यो र वंशावली येशूका निम्ति लेखिएकोले यसमा बयालिस पुस्ताका अभिलेखहरू राखिएका छन्। जब यो योसेफको पुस्तामा जान्छ, तब यसले तुरुन्तै भन्छ कि योसेफ मरियमको पति थिए, र यी शब्दहरू येशू अब्राहामका सन्तान हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नका निम्ति दिइएका थिए। के यो विरोधाभास होईन र? वंशावलीले स्पष्ट रूपमा योसेफको पुर्खाको अभिलेख राख्छ, यो स्पष्ट रूपमा योसेफको वंशावली हो, तर मत्तीले यो येशूको वंशावली हो भनेर जोड दिन्छन्। के यसले पवित्र आत्माद्वारा येशूको गर्भधारणको तथ्यलाई इन्कार गर्दैन र? त्यसो भए, मत्तीले लेखेको वंशावली मानव विचार होइन र? यो हास्यास्पद छ! यसरी यो पुस्तक पूर्ण रूपमा पवित्र आत्माबाट आएको थिएन भनेर तैँले थाहा पाउन सक्छस्।
अघिल्लो: बाइबल प्रभुको गवाही हो, र यो हाम्रो विश्‍वासको आधार पनि हो। प्रभुमा विश्‍वास गर्नेहरू सबैले बाइबलअनुसार नै दुई हजार वर्षदेखि विश्‍वास गर्दै आएका छन्। यसैले हामी के विश्‍वास गर्छौं भने, बाइबलले प्रभुको प्रतिनिधित्व गर्दछ, प्रभुमा विश्‍वास गर्नु भनेको बाइबलमा विश्‍वास गर्नु हो, र बाइबलमा विश्‍वास गर्नु भनेको प्रभुमा विश्‍वास गर्नु हो। हामी बाइबलबाट कहिल्यै टाढा जान सक्दैनौं। यदि हामी बाइबलबाट टाढा जान्छौं भने हामीले कसरी प्रभुमा विश्‍वास गर्न सक्छौं? के तपाईं हाम्रो बुझाइमा केही गल्‍ती छ भनेर भन्दैहुनुहुन्छ?
परमेश्‍वरका प्रासंगिक वचनहरू: आज, मानिसहरू बाइबल नै परमेश्‍वर हुन् र परमेश्‍वर नै बाइबल हुनुहुन्छ भनेर विश्‍वास गर्छन्। त्यसैले, तिनीहरू...